Iindaba - Unyango lobushushu kwiiNickel Alloys
Inkqubo yeNickel Alloys Heat Treatment ngokubanzi ibandakanya iinkqubo ezintathu ze ukufudumeza, ukugcinwa kobushushu, kwaye ukupholisa, kwaye ngamanye amaxesha zimbini kuphela iinkqubo zokufudumeza nokupholisa. Ezi nkqubo zidityanisiwe kwaye aziphazanyiswa.
Ukufudumezayenye yeenkqubo ezibalulekileyo zonyango lobushushu. Zininzi iindlela zokufudumeza unyango lobushushu bentsimbi. Ukusetyenziswa kokuqala kwamalahle kunye namalahle njengemithombo yobushushu, kunye nokusetyenziswa kweoyile kunye negesi. Ukusetyenziswa kombane kwenza ukufudumeza kube lula ukulawulwa, kwaye akukho kungcoliseka kwendalo. Le mithombo yobushushu inokusetyenziselwa ukufudumeza ngokuthe ngqo, okanye ukufudumeza ngokungangqalanga ngetyuwa okanye isinyithi, okanye amasuntswana adadayo.
Xa isinyithi sifudunyezwa, indawo yokusebenza ibhenceka emoyeni, kwaye i-oxidation kunye ne-decarburization zihlala zenzeka (Oko kukuthi, umxholo wekhabhoni kumphezulu wamacandelo ensimbi uyancitshiswa), onefuthe elibi kakhulu kwiipropathi zomhlaba iinxalenye emva konyango lobushushu. Ke ngoko, isinyithi kufuneka sihlale shushu kumoya olawulwayo okanye kumoya okhuselayo, ityuwa etyhidiweyo, kunye ne-vacuum, kwaye ukutyabeka okanye iindlela zokupakisha zinokusetyenziselwa ukukhusela kunye nokufudumeza.
Ubushushu bokufudumeza yenye yeeparameter zenkqubo ebalulekileyo yenkqubo yonyango lobushushu. Ukukhethwa kunye nokulawulwa kobushushu obushushu ngumbandela ophambili wokuqinisekisa umgangatho wonyango lobushushu. Iqondo lobushushu liyahluka ngezixhobo zentsimbi ezenziwayo kunye nonyango lobushushu, kodwa ihlala ishushu ngaphezulu kobushushu obuthile bokufumana isakhiwo sobushushu obuphezulu. Ukongeza, utshintsho lufuna ixesha elithile. Ke ngoko, xa umphezulu wesixhobo sesinyithi ufikelela kubushushu obufunekayo bokufudumeza, kufuneka igcinwe kobu bushushu kangangexesha elithile lokwenza ukuba ubushushu bangaphakathi nangaphandle buhambisane kwaye buzalise inguquko yesakhiwo. Eli xesha libizwa ngokuba lixesha lokubamba. Xa kusetyenziswa ubushushu bokuxinana ngamandla kunye nobushushu kunyango olusetyenzisiweyo, isantya sokufudumeza sikhawuleza kakhulu, kwaye akukho xesha libambekayo, ngelixa ixesha lokubamba unyango lobushushu luhlala lude.
UkupholisaKwakhona linyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yokunyanga ubushushu. Indlela yokupholisa iyahluka ukusuka kwinkqubo ukuya kwinkqubo, kwaye eyona nto ibalulekileyo kukulawula inqanaba lokupholisa. Ngokubanzi, ukubamba inqanaba kunesantya esipholileyo sokupholisa, ukubuyisela izinga lokupholisa ngokukhawuleza, kwaye ukucima isantya sokupholisa kukhawuleza. Nangona kunjalo, kukho iimfuno ezahlukeneyo ngenxa yamanqanaba ahlukeneyo esinyithi. Umzekelo, intsimbi enzima engenanto inokucinywa kwinqanaba elifanayo lokupholisa njengesiqhelo.
Okulandelayo: Ubuninzi beNickel Alloys Density
iringi yesitayile, Ucingo lweWelding, Isitayile 6, Yenza ingxubevange R26 evulwa, Isitayile 6B, IHaynes 25 Intambo,